Iindaba -Zeziphi izinto ezikukhawulezisayo ngeAlarm Pad Pad
1. Ukuqhuba ngokukhawuleza kwekhompyutha:
Igama elibomvu elithi "nceda ujonge iipads zebreyiki" ziya kuvela kwicala le-alam ngokubanzi. Ke kukho i icon, esisangqa esingqongwe zizibiyeli ezimbalwa ezaphukileyo. Ngokubanzi, ibonisa ukuba isondele kumda kwaye kufuneka itshintshwe kwangoko.
2. Iphedi yokuqhekeza iza nesikhumbuzi kwiphepha lesilumkiso:
Iipads zokuqhekeza zezinye iimoto ezindala azidibananga nekhompyuter yohambo, kodwa isiqwenga esincinci sentsimbi esinokuthi ialam ifakelwe kwiipreyiti zokubopha. Xa isixhobo sokukhuhlana siphelile, idisk yokuqhekeza ayisiyi-brake pad, kodwa yipleyiti encinci yentsimbi yealam. Ngeli xesha, isithuthi siza kwenza isandi esiqatha "sokutswina" phakathi kwentsimbi, nto leyo engumqondiso wokutshintsha iipleyiti zokuqhekeza.
3. Indlela elula yokuzihlola yemihla ngemihla:
Khangela ukuba ngaba iziqhoboshi ze-brake kunye nee-brake disc zibhityile. Ungasebenzisa isibane esincinci sokujonga kunye nokuhlola. Xa uhlolo lufumanisa ukuba izinto ezimnyama zokuxubana zepads zaqhekeka sele ziza kuguga, kwaye ubukhulu bungaphantsi kwe-5 mm, kuya kufuneka ucinge ngokutshintsha.
4. Ukuziva kweemoto:
Ukuba unamava amaninzi, unokuziva ngathi iibhuleki zithambile xa iiphedi zebhuleki zingafumaneki. Oku kuxhomekeke kumava akho okuqhuba iminyaka emininzi.
Xa utshintsha iphedi yokuqhekeza, isiphumo sokuqhekeza ngokuqinisekileyo asilunganga njengangaphambili. Uyakuva ukuba i-brake ithambile. Ngeli xesha, kufuneka unyathele kwi-brake ukuphelisa umsantsa phakathi kwephedi kunye nediski yokuqhekeza. Ukongeza, isiphumo esincomekayo se-braking sinokufezekiswa kuphela emva kokubaleka kwi-200 km. Iipads zebreyiki ezisandul 'ukutshintshwa kufuneka ziqhutywe ngononophelo kwaye ziqwalasele ukuba zingalandeli imoto ngqongqo.